အလယ်အလတ်စက်ရုံ - တရုတ်အလယ်အလတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊
ဓာတုကုန်ကြမ်းများဖြစ်သောကျောက်မီးသွေးကတ္တရာစေးများသို့မဟုတ်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သောဆိုးဆေးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဆေးဝါးများ၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း： ကုန်ပစ္စည်းအမည် CAS NO ။ အသုံးပြုခြင်း P-AMINOPHENOL 123-30-8 ဆိုးဆေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလယ်အလတ်၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၊ ဆန့်ကျင်ဓာတ်တိုးဆေးနှင့်ရေနံအပိုပစ္စည်းများ၏ပြင်ဆင်ခြင်း Salicylaldehyde 90-02-8 ခရမ်းရောင်ရေမွှေးပိုးသတ်ဆေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလယ်အလတ်အဆင့်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း ...
ဓာတုဗေဒအမည် 2-Amino-4-tert-butylphenol Synonyms： 2-AMINO-4-T-BUTYLPHENOL; 2-AMINO-4-TERT-BUTYLPHENOL; 2-HYDROXY-5-TERT-BUTYLANILINE; T-BUTYL-O-AMINOPO ; o-Amino-p-tert-butylphenol; 2-Amino-4-tert-Butylphenol 1199-46-8; p-tert-Butyl-o-aminophenol; 2-AMINO-4-TERT မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C10H15NO CAS နံပါတ် ၁၁၉၉-၄၆-၈ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအရည်ပျော်မှတ် ၁၆၂-၁၆၄ ≥ပါဝင်မှု %99% (HP အစိုဓာတ် <0.2% ပြာမှုန့် <0.4% မတည်ငြိမ်သော <0.4% အသုံးပြုမှုများ: လျှောက်လွှာများ - ...
ဓာတုဗေဒအမည် 2-Aminophenol Synonyms I CI 76520; CI Oxidation အခြေစိုက်စခန်း 17; 2-Amino-1-hydroxybenzene; 2-Hydroxyaniline; ortho amino phenol; o-Hydroxyaniline; အိုအာမီနိုဖင်နို; အိုမီနိုဖင်နော၊ O-AMINOPHENOL မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C6H4O4S CAS နံပါတ် ၉၅-၅၅-၆ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အသွင်သဏ္ဌာန် - အဖြူရောင်သုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော MP - ၁၇၃-၁၇၅ urity သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု - ၉၈% မိနစ်အသုံးပြုမှု - ထုတ်ကုန်သည်ပိုးသတ်ဆေး၊ အလယ်အလတ်ဓါတ်ကူပစ္စည်း၊ diazo ဆိုးဆေးနှင့်ဆာလဖာဆိုးဆေးများအတွက်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ 1. 25KG အိတ် 2. ထုတ်ကုန်ကိုသိမ်းထားပါ။
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမည် 2-Formylbenzenesulfonic အက်ဆစ်ဆိုဒီယမ်ဆား Synonyms ：: Benzaldehyde ortho sulfonic acid (ဆိုဒီယမ်ဆား) မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C7H5O4SNa မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၂၀၈.၁၆ ဂုဏ်သတ္တိများ - ဖြူကြည်လင်သောအမှုန့်, ​​ရေတွင်အလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်သည် အသွင်အပြင်: အဖြူရောင်အမှုန့်အစိုင်အခဲ Assay (w / w)%: ≥95ရေ (w / w)%: ≤1ဖြေရှင်းချက်စမ်းသပ်မှု၌ရေ - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသုံးပြုမှု: fluorescent အရောင်ချွတ်အရောင်ချွတ်အရောင်တင်ခြင်းများအတွက်အလယ်အလတ်ဖြစ်သော CBS, triphenylmethane dge, Package 1. 25KG အိတ် ၂ ကုန်ပစ္စည်းကိုအေးမြ။ ခြောက်သွေ့။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်သိုလှောင်ထားပါ။
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမည် 3- (Chloromethyl) Tolunitrile CAS ：: 64407-07-4 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C8H6ClN မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၅၁.၅၉၂၉ ပုံပန်းသဏ္ဌာန် - အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်အသုံးပြုမှု - အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုအလယ်အလတ်အထုပ် ၁။ ၂၅ ကီလိုဂရမ်အိတ် ၂။ ကုန်ပစ္စည်းကိုအေး။ ခြောက်သွေ့။ သိုလှောင်ထားပါ။ သဟဇာတပစ္စည်းများမှကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်areaရိယာ။
3- Methylbenzoic အက်ဆစ်
ဓာတုဗေဒအမည်: ၃ -Toluic acid synonyms: 3-Methylbenzoic acid; မီတာ - Methylbenzoic အက်ဆစ်; m-Toluylic acid၊ beta-methylbenzoic acid မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C8H8O2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၃၆.၁၅ CAS နံပါတ် - 99-04-7 EINECS / ELINCS - 202-723-9 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အကြောင်းအရာသတ်မှတ်ချက်များပုံပန်းသဏ္Whiteာန်အဖြူသို့မဟုတ်အဝါရောင်ကြည်လင်မှုန့်အမှုန့် 99.0% Water 0.20% max အရည်ပျော်မှတ် 109.0 -112.0ºC Isophtalic acid 0.20% max Benzoic acid ၀.၃၀% max Isomer ၀.၂၀% သိပ်သည်းဆ ၁.၀၅၄ အရည်ပျော်မှတ် ၁၀၈-၁၁၂ ºC ...
ဘစ်ဖင်နိုလစ် P (2,2-Bis (4-hydroxyphenyl) -4-methylpentane)
ဓာတုဗေဒအမည်: 2,2-Bis (4-hydroxyphenyl) -4-methylpentane မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C18H22O2 CAS #: 6807-17-6 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁ အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့် ၂ ဆန်းစစ်မှု - ၉၈% min ၃ အရည်ပျော်မှတ် - ၁၅၉ - ၁၆၂ ° C4မတည်ငြိမ်သောကိစ္စ - ၀.၅% max ၅ ပြာ - ၀.၁% - အထုပ်နှင့်သိုလှောင်ခြင်း ၁။ ၂၅ ကီလိုဂရမ်ဖိုင်ဘာစည် ၂။ ထုတ်ကုန်ကိုအေးဆေးခြောက်သွေ့။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သဟဇာတမဖြစ်သောပစ္စည်းများနှင့်သိမ်းဆည်းထားပါ။
ဓာတုဗေဒအမည်: Diphenylamine Formula အလေးချိန် - ၁၆၉.၂၂ ဖော်မြူလာ - C12H11N CAS NO .: 122-39-4 EINECS NO .: 204-539-4 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအသွင်အပြင်အဖြူနှင့်အညိုရောင် flakiness Diphenylamine ≥99.60% Low Boiling Point iling0.30% အမြင့် အနာစိမ်း .300.30% Aniline ine0.10% လျှောက်လွှာ: Diphenylamine ကိုရော်ဘာဓါတ်တိုးဆေးဆိုးဆေး၊ ဆေးဆိုးဆေးများ၊ အလယ်အလတ်ဆေးဝါးများ၊ သိမ်းဆည်းခြင်း: သိုလှောင်ထားသောစတိုးဆိုင်တွင်ပါဝင်သည် ...
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြု bisphenol တစ် ဦး
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအမည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘိုင်ဖင်နိုလစ်တစ် Synonyms ,4 4,4-Isopropylidenedicyclohexanol, isomers အရောအနှော; 2,2-Bis (hydroxycyclohexyl) propanone; H-BisA (HBPA)၊ 4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol (HBPA); 4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol; HBPA; ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟိုက်ဒြိုစတာပါသောဘစ်ဖိုနို (အေ)၊ 4,4′-propane-2,2-diyldicyclohexanol; 4- [1- (4-hydroxycyclohexyl) -1-methyl-ethyl] cyclohexanol မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C15H28O2 CAS နံပါတ် 80-04-6 အသေးစိတ်အချက်အလက်များအသွင်အပြင်: အဖြူရောင်အလွှာဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘိုင်ဖင်နိုလစ်အေ၊ % (မီတာ / မီတာ) ... ：9...
ဓာတုဗေဒအမည် O-Anisaldehyde ပြောရလျှင် ：: 2-Methoxybenzaldehyde; O-Methoxylbenzaldehyde မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C8H8O2 CAS နံပါတ် 135-02-4 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပုံပန်းသဏ္:ာန်မပါသောအမှုန့်အရည်ပျော်မှတ် - ၃၄-၄၀ ℃ပြုတ်နိုင်သည့်အချက် - ၂၃၈ ℃အလင်းယိုင်အညွှန်း - ၁.၅၆၀၈ Flash အချက် - ၁၁၇ ℃အသုံးချခြင်း - အော်ဂဲနစ်ဖွဲ့စည်းမှုအလယ်အလတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အမွှေးအကြိုင်, ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း ၁.၅ ကီလိုဂရမ်အိတ် ၂။ ထုတ်ကုန်ကိုအေးဆေးခြောက်သွေ့သောလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သဟဇာတမဖြစ်သောပစ္စည်းများနှင့်သိမ်းဆည်းထားပါ။
ဓာတုဗေဒအမည် p-Toluic acid synonyms： para-Toluic acid; p-carboxytoluene; p-toluic; P-METHYLBENZOIC အက်ဆစ်; RARECHEM AL BO 0067; P-TOLUYLIC အက်ဆစ်; P-TOLUIC အက်ဆစ်; PTLA မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C8H8O2 CAS နံပါတ် 99-94-5 သတ်မှတ်ချက်အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်အမှုန့်သို့မဟုတ်ကြည်လင်အရည်ပျော်မှတ် - ၁၇၈ မှ ၁၈၁ ℃Content≥99% Applications များ - အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုအတွက်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် PAMBA, p-Tolunitrile, photosensitive ပစ္စည်းများနှင့်အခြားပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း ၁။ ၂၅ ကီလိုဂရမ်အိတ် ၂ ။
ဓာတုဗေဒအမည် Salicylaldehyde မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C7H6O2 မော်လီကျူးအလေးချိန် ၁၂၂.၁၂ CAS နံပါတ် ၉၀-၂၀၀-8 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အကြောင်းအရာ - ၉၈% အရည်ပျော်မှတ် - -7 ℃အသွင်အပြင် - အရောင် - အဝါရောင်နှင့်ပွင့်လင်းသောအရည် o-chlorobenzaldehyde: ≤3.5-0.8% Applications များခရမ်းရောင်ရေမွှေးကိုပြင်ဆင်ခြင်း ဒါပေါ်မှာ germicide ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလယ်အလတ်နှင့်။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း ၁.၂၀၀KG / တံဆိပ်ခတ်ထားသောသံပလတ်စတစ်ဒြပ်ပေါင်းစည် ၂ ကိုနေရောင်ခြည်မှအအေးခံ။ အအေးခံသည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ထားပါ။